कोरोना रोकथाम: अमेरिकी सहायता प्रस्ताव इरानद्वारा अस्वीकार – Karnalisandesh
कोरोना रोकथाम: अमेरिकी सहायता प्रस्ताव इरानद्वारा अस्वीकार
प्रकाशित मितिः १० चैत्र २०७६, सोमबार ११:२५ March 23, 2020
काठमाडौँ। कोरोना भाइरसविरुद्धको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अमेरिकी सहयोग इरानले अस्वीकार गरेको छ। इरानमा कोरोना संक्रमणका कारण मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि अमेरिकाले मानवीय सहायता प्रस्ताव गरेको थियो। तर, त्यसलाई इरानले अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
हाल इरानको मध्यपूर्वी क्षेत्र कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। सो क्षेत्रमा २१ हजार ६ सय ३८ जना संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने १ हजार ६८५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
अमेरिकाको सहयोग प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै इरानका सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खमेनीले भने, ‘अमेरिकाले कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा मद्दत गर्ने प्रस्ताव धेरै पटक ग¥यो। आफैं अभावमा गुज्रिरहेको अमेरिकाले यस्तो प्रस्ताव गर्नु आफैंमा अचम्म छ। दोस्रो कुरा अमेरिकामाथि यो भाइरस पैदा गरेको पनि आरोप छ।’
खमेनीले भने, ‘सत्य के हो, हामीलाई थाहा छैन। यदि तपाईंलाई यस्तो आरोप लाग्यो भने कुनै बुद्धिमान व्यक्तिले तपाईंलाई भरोसा गर्न सक्छ ? तपाईंले गरेको सहयोग प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्छ ? इरानमा कोरोना भाइरस झन् बढ्ने वा भाइरस सधैं रहीरहने औषधि पनि दिन्छ कि ?’
अमेरिका र इरानले एकअर्कालाई दुश्मन ठान्दै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौतालाई सन् २०१८ मा खारेज गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो।
अमेरिकाले इरानमाथि धेरै प्रकारका प्रतिबन्ध समेत लगाउँदै आएको छ। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले यही मौकामा अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न इरानी जनतालाई आह्वान गरेका छन्। एजेन्सी।